Ra’iisal Wasaare Maxamed Rooble maanta muxuu u sheegay Baarlamaanka Soomaaliya? – Kalfadhi
Ra’iisal Wasaare Maxamed Rooble maanta muxuu u sheegay Baarlamaanka Soomaaliya?
February 10, 2021 February 10, 2021 Hassan Istiila
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta uga warbixiyay Golaha Shacabka ee BFS waxyaabihii u qabsoomay 100-kii maalmood ee Xukuumaddu shaqeyneysay oo ku saleysan barnaamijkii xukuumaddiisu ay horay ula wadaagay Golaha Shacabka.
Mudane Rooble, ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay dadaado badan ku bixisay arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan soo magacaabida guddiyada iyo booqashooyin uu ku tagay qaar kamid ah xarumaha maamul-gobolleedyada, la tacaalidda xanuunka COVID, kordhinta daqliga gaar ahaan daqliga kasoo xarooda dekadda oo kordhay 30 boqolkiiba.
Maxamed Ibraahim, oo kamid ah dhallinyarada sannadka hamiga ka leh ka mid noqoshada Baarlamaanka, ayaa Kalfadhi u sheegay in muddada gaaban ee uu xukunka joogo iyo dedaalka uu sameeyay Mudane Rooble ay isku qalmaan, balse waxaa uu xusay in safar dheer iyo wakhti gaaban ay ku hor-gudbanyihiin isaga iyo xukuumaddiisa.
Ra’iisul wasaare Rooble oo maanta warbixin siiyay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka